Canon's Pixma Mx7600 Ihe niile dị ugbu a bụ Pixma Mx922
Nyocha ahia Ngwa
Canon si Pixma MX922
Uzo Pixma emeela otutu ebe otutu afo 2008
Afọ asatọ bụ ogologo oge na ndụ nke onye nbipute, nke ahụ bụ oge ọ dị kemgbe mmalite nke Canon's Pixma MX7600 Onye na-ebi akwụkwọ niile, ma yikarị ka afọ asaa ebe Canon dochie ya na "MX," ma ọ̄ bụ ụlọ ọrụ-ụlọ ọrụ, ihe nlereanya. Ihe kacha nso na oge a bụ Pixma MX922 Wireless Office All-in-One Printer.
N'iburu nke ahụ n'uche, ihe ndị ọzọ nke nyochaa adịghị mkpa.
Ịzụta ihe niile dị na Amazon nke Canon Pixma MX922
== nyocha mbụ ==
Dị ka ndị ọzọ na Canon na-ebi akwụkwọ, onye nchịkọta ihe a nile na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Mmetụta bipụta bụ ihe dị iche iche ma ọ bụ ihe dị mma iji nwee ike iji akwụkwọ doro anya ma na-enweta ezigbo nsonaazụ. Ọ bụ ígwè ọrụ buru ibu na nke dị arọ, a na-akwụkwa ya ọnụ na njedebe nke ụlọ ahịa inkjet nile, ma echeghị m na mmụba dị na ibipụta mma zuru ezu iji mee ka ọ dị mma karịa ndị ọzọ Pixmas. ; ma ọ bụrụ na ịchọrọ àgwà kachasị elu ma ghara iche na ị ga-akwụ ụgwọ, ị ga-ahụ MX7600 n'anya.
Ụdị mmapụta dị mma
Networkable site na Ethernet
Ọrụ kaadị ebe nchekwa dị
Nnukwu na arọ
Onye na-ebi akwụkwọ, nyocha, fax, copier
Ruo 28 pages kwa nkeji (ppm) monochrome, 23 ppm agba (dabere na ntọala)
Onu ozo ink isii na otu maka ikpuchi ink
Nyocha ntuziaka - Canon Pixma MX7600 Onye na-ebipụta ihe niile
Ọ bụrụ na ndị mmadụ kpọrọ ndị na-ebi akwụkwọ ha ụzọ nke ụfọdụ n'ime anyị na-akpọ ụgbọala ha, a ga-akpọ Canon Pixma MX7600 All-in-One Printer "The Beast." N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40 lbs, ọ bụ ihe siri ike nanị iji nweta ya na steepụ na nke katọn.
Mana ozugbo ọ na-arụ ọrụ, ọ dị ngwa igosi na nnukwu ego ya ziri ezi. Nke a Pixma na-akọwa nkà na ụzụ nke a na-akpọ PgR, nke na-agbakwụnye nnukwu tank nke ikpuchi ink na ngwa ngwa isii nke oji na agba. Ihe omimi doro anya na-aga n'ihu na nkedo ndị ọzọ ma na-enye aka ịmepụta ihe osise mara mma, ndị na-acha ezigbo mma na ndị na-ese onyinyo. Ọbụna nke ka mma, ink nke ink nke ọzọ na-enyere aka igbochi inks, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-ebipụta na akwụkwọ doro anya. N'elu ala, ọ bụ otu ink katridge iji dochie.
Mbipụta na-apụta ngwa ngwa, na-ese foto foto 4x6 e bipụtara n'okpuru minit na foto 8x10 na-abụghị ihe karịrị nkeji. Ụdị ahụ dị mma; foto ndị dị nkọ ma na-acha ọcha, na ink bụ akọrọ ka aka na oge mpempe akwụkwọ pụta. Mbipụta na agba zuru oke na akwụkwọ dị larịị hapụrụ akwụkwọ ahụ dị ntakịrị ma ọ bụghị dị nro ma ọ bụ nhicha dịka ọ pụrụ ịbụ ikpe mgbe ị na-ebipụta ihe ọ bụla kama akwụkwọ edemede. Fax, iṅomi, na iṅomi ọrụ niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Ntugharị LCD nke onye nbipute dị ntakịrị na-atụle otú akụkụ ndị ọzọ fọdụrụnụ, a na-ehichapụkwa bọtịnụ (bọtịnụ Kaadị Kaadị ejiri tinye aka mgbe ị na-akwadebe ibipụta foto site na kaadị SD ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ). Enweghi m mmasị na ngwanrọ Canon na-enye (Easy-PhotoPrint EX, MP Navigator EX, Newsoft Presto Page Manage) nke niile na-arụ ọrụ nke ọma ma o yiri ka ọ bụ ihe a chọrọ karịa karịa otu nhọrọ nke ndị ọkachamara nke ọma. .
Kudos na Canon maka imepụta onye nbipute na-emepụta ma ọ bụrụ na ọ gaghị eme ka ọ ghara ikuku. Site na netwọk netwọk fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla, oge eruola ka ịmalite ịmalite ọrụ ahụ.
Canon Pixma MP480 Nyochaa Na-ebipụta Nanị
Ejikere Fitbit 2 Nyocha
Esi họrọ Ntugharị Disk SSD, ngwakọ ma ọ bụ Diski Ike
Epson WorkForce DS-510 Scanner Scanner
Ọkụ ya: Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Amazon Kindle
Na-ebu nnukwu osisi: Satechi Bluetooth Smart Selfie Arm
Hichapụ Akaụntụ Email na Outlook na Windows Mail
Ebee ka Ebe Igwe Ndi Ntọala nke Google Earth?
Atụmatụ Echiche Ziri Ezi
Ndị Kasịnụ Koss 8 kasị mma ịzụta na 2018
Gmail Gmail na Outlook 2002 ma ọ bụ 2003 Iji POP
Esi ede Mark dika Ozi na Outlook
Maka Nyochacha kachasị mma, Calibrate gị nyocha
Akụkọ: Instagram na Snapchat
Jiri CSS ka ịdebe akwukwọ na nghazi uzo di oke
Blipsy Ogwe: Retro Video Arcade na Ogwe na LA
Google Videos: Nduzi nke onye mbu
Ezigbo weebụsaịtị na BitTorrent
Umu igwefoto kacha mma nke WiFi kacha mma iji zụta na 2018
Otu esi eji aka na-anwale ntinye ikike site na igwe onyonyo
Ihe ị ga-eleba anya na ime ihe mbụ gị
Siri maka Definition iPhone
Esi mee ka Blog Blog n'onwe gị
Otu esi edozi Microsoft OneDrive maka Mac
5 Nzọụkwụ maka Ịtọlite ​​Laptọọpụ ọhụrụ na Mbadamba
Esi edozi ihe mgbochi m nwere ike ime
Otu esi ejikọ iPod Touch ma ọ bụ iPhone na Wi-Fi
Jiri iTunes Genius iji chọpụta ọhụụ ọhụrụ